Ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany Bonaire dia miantso an'i Dr. Robertico R. Croes ho mpahay tetikady momba ny fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany Bonaire dia miantso an'i Dr. Robertico R. Croes ho mpahay tetikady momba ny fizahan-tany
fanabeazana • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Bonaire, nosy iray ao amin'ny Netherlands, dia eo amoron'ny morontsirak'i Venezoela amin'ny faritra atsimon'i Karaiba.
Manoloana ny fanendren'i Bonaire ny talen'ny fizahan-tany vaovao, Miles Mercera, Tourism Corporation Bonaire (TCB) dia faly ihany koa nanambara ny fanampian'ny Dr. Robertico R. Croes ho Strategistan'ny Fizahan-tany sy mpanolotsaina azy.
Dr. Croes, Profesora iray ary ny Dean Associate izay miasa koa ankehitriny ho talen'ny Ivon-toeram-pianarana fizahan-tany momba ny fizahantany ao amin'ny University of Central Florida's Rosen College of Hospitality Management dia hitondra 40 taona momba ny fizahan-tany sy ny raharaham-bahiny. ny andraikitra.
"Fotoana mampihetsi-po amin'ny fandraisana anjara amin'ny paikadim-pizahan-tany ho an'i Bonaire satria toa tsy vitan'ny hoe sitrana ihany ilay nosy fa manavao ihany koa ny toerany amin'ny toerana tokony haleha," hoy i Croes. "Voninahitra ho ahy ny afaka mampindrana ny fahaizako manampy amin'ny fitarihana an'i Bonaire sy ny toekareny amin'ny lalana tsara satria mahazo fampahafantarana amin'ny sehatra vaovao izy."
Ny fiaviany marobe dia ny famoahana boky efatra momba ny fitantanana fizahan-tany amin'ny toerana itodian'ny rano mafana, ny fizahan-tany ary ny fihenan'ny fahantrana, ny fanamby atrehin'ireo toerana kely any amin'ny nosy, ary ny fampiharana ireo maodely fitakiana toekarena kely.
Croes dia hamoaka ny boky fahadimy, Nosy kely sy fizahan-tany madinidinika kely, amin'ny Desambra 2021. Ankoatr'izay, nandray anjara tamin'ny boky maro hafa izy, namoaka sanganasa 130 navoaka, namoaka tatitra indostrialy mihoatra ny 30, ary nanao famelabelarana momba ireo lohahevitra ireo nandritra ny izao tontolo izao, Croes koa dia nanontany tamin'ny firenena maro toa an'i Nikaragoà, Costa Rica, Ekoatera, Brezila, Aruba, Curacao, Bonaire, Grenada, Italia, ary Etazonia.
Hatramin'ny nahazoany ny mari-pahaizana doctorat avy amin'ny University of Twente, Netherlands, Croes dia namoaka lahatsoratra tsy tambo isaina tamin'ny diary fizahan-tany maro karazana ary nanompo tao amin'ny birao famoahana efatra. Croes dia mpandray ny mari-pahaizana Thea Sinclair 2015 sy 2018, ny UCF Research incitive Award (RIA) 2015, taratasy fikarohana mpianatra ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma 2015 tsara indrindra, natolotry ny Symposium Fikarohana momba ny fanabeazana momba ny fitantanam-bola momba ny fitantanana ara-bola. New York University, NY, 32 Novambra 7, ary loka maro hafa.